किन फरफराउछ आँखा ? के शुभ र अशुभस‌ंग यसको सम्बन्ध छ ? - hamro Desh
आखाँ फरफराउनु भनेको हाम्रोआखाँको मथिल्लो या तल्लो परेलामा अनियन्त्रित रुपमा कम्पन हुनु हो । बिशेषगरी आखाँ फरफराउदा माथिल्लो परेला फरफराउने गर्दछ । आखाँ फरफराउनुलाई मेडिकल भाषामा “ब्लेफारोस्पाज्म” भनिन्छ ।
यसले दुबै आखाँको मान्सपेशीमा प्रभाव पार्दछ । कसैको आखाँ केहि क्षणको लागि मात्र फरफराउने गर्दछ भने कसै कसैको लामो समयसम्म पनि फरफराउन सक्छ । पुरुषको तुलनामा महिलाका आखाँ फरफराउने समस्या बढिनै देखिन्छ ।
# कारण: आखाँ फरफराउनुका कारण यहि नै हो भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन । किनभने यसको कारण हालसम्म अज्ञात छ । चिकित्साबिद्हरुको भनाईअनुसार संभावित कारणहरुमा निम्न लिखित कारणहरु हुन सक्छन् :
१०) वंशानुगत, परिवारमा कसैलाई आँखा फरफरफराउने समस्या छभने घरका अन्य सदस्यहरुलाई पनि यो समस्या हुने बढि संभावना रहन्छ।
अधिकांश ब्याक्तिहरुमा कुनै प्रकारको पुर्वसंकेत बिना नै आँखा फरफराउने समस्याको बिकास हुन्छ । आँखा पोल्नु र थकानको साथै फरफराउने क्रमिक रुपमा बढदै जान्छ ।
कसै-कसैलाई यो समस्याको साथै भावनात्मक तनाव या संवेदनशिलताको पनि अनुभव हुनसक्छ । कुनै काम या कुनै बिषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ अथवा सुतिरहेको अवस्थामा आँखा फरफराउन कम हुन्छ । अत्याधिकरुपले आँखा फरफराउन थालेमा अनुहारको मान्सपेशीहरुमा ऐठन पनि हुने संभावना रहन्छ ।
यदि आँखाको फरफराउने समस्या लामो समयसम्म चलि नै रहयोभने आखाँको नानी (कोर्निया) क्षतिग्रस्त भई सदाका लागि आँखा बिग्रिन सक्छ । यसैगरि आँखा फरफराउनुको साथै अनुहारको मान्सपेशीहरुमा पनि फुरफुराउने, ऐठन हुने जस्ता समस्या देखा पर्दछ । यसले आखाँको मान्सपेशीको क्यान्सर हुने पनि संकेत गरिरहेको हुनसक्छ ।
आँखा फरफराउनुको कुनै ठोसकारण न भएको हुँदा यसलाइ रोक्ने निश्चित कुनै उपाय पनि छैन । तर कुनैपनि कुरा बिनाकारण हुँदैन भने जस्तै के कारणले गर्दा तपाईको आँखा फरफराउन थाल्छ । त्यसलाई बिचार गरेर यस समस्यालाई रोकथाम गर्न सकिने छ । आफ्नो दैनिक आहारमा हरियो सागसब्जिहरु, फलफुलमा केरा, सुन्ताला, मौसम, किसमिस समावेस आवश्यक रुपले गर्ने जुनमा प्रचुर मात्रामा पोटासियम, मेगनेशियम र जिकं पाईन्छ।
यसको सेवनले यो रोगलाइ निको पार्नमा मद्दत पुर्याउछ । अत्यधिक मधपान, धुम्रपान, कफीको सेवनको कारणले होभने यसको सेवन न गर्नु नै बेश हुन्छ, यदि छोड्न सकिंदैन भने बिस्तारै कम गर्दै लैजानु पर्दछ । कतिपय मानिसहरुले आखाँ फरफराउन रोक्नको लागि परेलामाथी सानो कागजको टुक्रालाई टाँसेर राख्ने गर्दछन् । यसबाट पनि आखाँको कम्पनलाइ अलि कति भएपनि कम गराउनमा मद्दत पुराउँछ ।
आँखालाई माड्नु हुँदैन । आखाँको सुरक्षाका उपायहरुलाई फलो गर्ने । आखाँको व्यायम गर्ने । योग, ध्यान आदि गर्नलेपनि यसमा फाईदा हुन्छ।
हुन त आँखा फरफराउनु सामान्यतया केहि छिन मै छाड्दछ । कुनै प्रकारको औषधिको आवश्यकाता नै पर्दैन । तर यदि लामो समयसम्म आँखा फरफराएर समस्या नै हुने गर्दछ भने त्यसलाई बेवास्ता गरेर बस्नु राम्रो हुदैन ।
तुरन्त नजिकैको आखाँ अस्पताल, किल्निक वा आफ्नो फेमिली चिकित्सकसँग सल्लाह लिनु जरुरी हुन्छ । होमियोप्याथीमा रोगीको उपचार उसको समस्टिगत लक्षणहरुको आधारलाई मध्येनजर राखेर उपचार गरिने गरिन्छ ।
रोगीको मानसिक लक्षणहरुलाई उपचारको क्रममा बढि महत्व दिईने गरिन्छ, किनभने यो रोगको मुख्य केन्द्र बिन्दू हाम्रो मस्तिष्कको एक भाग (Basal Ganglion) हो ।
यसै ग्लान्डस (ग्रन्थी) द्वारा शरिरका मस्सलहरु नियन्त्रित हुने गर्दछन् । भनिन्छ एलोप्याथिकमा यस रोगको कुनै उपचार नै छैन । होमियोप्याथि चिकित्सामा यसरोगको लक्षणअनुसार प्रयोग गरिने केहि औषधिहरु निम्नलिखित छन् ।
१) बेलाडोना (२) हिपर सल्फर (३) केमोमिला (४) कुप्रम मेटालिकम (५) नेट्रम –म्युर (६) सिना ( ७) जिकंम (८) जेल्सिमियम (९) युफ्रेशिया (१०) नक्स भोम (११) पल्साटिला (१२) रसटक्स (१३) पलम्बम (१४) एगारिकस (१५) मेगफाँस (१६) मर्कशल (१७) ईग्नेशिया आदि। उपरोक्त औषधिहरुको प्रयोग कुनै स्थानिय होमियोप्याथिक चिकित्सकसँग सल्लाह लिई प्रयोग गर्नु लाभदायक हुन्छ । अस्तु
-डा. लालित कुमार मिश्र